Ungakufunda kanjani Amashadi we-Forex, Abaqondisi besiqalo kumakhandlela, umugqa kanye namashadi we-Bar
Imfundo - Imibhalo nezifundo - izihloko ezisekelwe ngaphambili - Ungakufunda kanjani amashadi we-Forex
Emhlabeni wokuhweba we-Forex, kufanele ufunde kuqala amashadi ngaphambi kokuqala ukuhweba. Kukuyisisekelo lapho iningi lamazinga wokushintshanisa nokubikezela kwenziwa khona yingakho kuyithuluzi elibaluleke kakhulu lomthengisi. Eshadini le-Forex, uzobona umehluko wezimali namazinga abo wokushintshana nokuthi intengo yamanje iguqulwa kanjani nesikhathi. Lawa manani asukela ku-GBP / JPY (amakhilogremu aseBrithani kuye kuma-yen waseJapan) kuya ku-EUR / USD (ama-Euro kuya kuma-Dollars ase-US) namanye amabhangqa emali ongawabuka.
Ishadi le-Forex lichazwa njenge umfanekiso obonakalayo ngentengo yamanani abhangqiwe ngaphezulu kohlaka oluthile lwesikhathi.
Kufanekisela umsebenzi wezohwebo ezenzeka isikhathi sokuhweba esithile kungakhathalekile ukuthi kungaba yimizuzu, amahora, izinsuku noma amasonto. Ukushintshwa kwentengo kwenzeka ngasiphi isikhathi lapho kungekho noyedwa ongalindela khona impela njengabahwebi, kufanele sikwazi ukubhekana nobungozi bokwenza okunjalo futhi senze amathuba futhi kulapho uzodinga usizo lweshadi.
Kulula kakhulu ukusebenzisa amashadi njengoba ukwazi ukuqonda ushintsho lwamanani ngokubheka nje kuzo. Eshadini, uzobona ukuthi izinhlobo ezahlukene zezimali zihamba kanjani futhi ungathola ukuthambekela kokukhuphuka noma phansi ngesikhathi esithile. Ihlobene nezembe ezimbili kanye i-eksisi ingasohlangothini oluqondile, futhi imele inani lentengo ngenkathi isikhathi sikhonjiswa ohlangothini oluvulekile okuyi x-eksisi.
Esikhathini esedlule, abantu bebesebenzisa izandla ukudweba amashadi kepha kulezi zinsuku kukhona isoftware engabahlela kwesobunxele uye kwesokudla Yonkana x-eksisi.
Isebenza kanjani ishadi lentengo
Ishadi lentengo libonisa ukwehluka ngokwesidingo nokunikelwayo futhi liyonke ukuthengiselana kwakho ngakunye ngaso sonke isikhathi. Kunezinto ezahlukahlukene zezindaba ozozithola eshadini futhi lokhu kubandakanya izindaba zesikhathi esizayo nokulindelwe nakho okusiza abathengisi ukuguqula amanani abo. Kodwa-ke, izindaba zingahluka kulokho okuza esikhathini esizayo, futhi ngalesi sikhathi, abathengisi bazothuthukisa futhi futhi bashintshe amanani abo. Lokhu kuyaqhubeka njengoba umjikelezo uqhubeka.
Noma ngabe imisebenzi ivela kuma-algorithms amaningi noma kubantu, ishadi libahlanganisa. Kungale ndlela efanayo lapho uzothola imininingwane ehlukile eshadini kungaba kusuka kothumela ngaphandle, phakathi ebhange, e-AI, noma kubathengisi abathengisa ngokuqondene nokuthengiselana kwabo.
Izinhlobo ezahlukahlukene zamashadi e-Forex
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamashadi ku Forex kodwa ezisetshenziswa kakhulu futhi zidume kakhulu amashadi omugqa, amashadi we-bar, Futhi amashadi ekhandlela.
Ishadi lomugqa lilula kunawo wonke. Udweba umugqa ukuze ujoyine izintengo zokuvala futhi ngale ndlela, uveza ukukhuphuka nokuwa kwezimali ezihanjiwe nesikhathi. Noma kulula ukulandela, akunikeli abathengisi ulwazi olwanele ngokuziphatha kwamanani. Uzothola kuphela ngemuva kwenkathi yokuthi intengo iphelile ku-X futhi akukho okunye.
Kodwa-ke, kukusiza ekubukeni kalula izitayela nokwenza ukuqhathanisa namanani wokuvala wezikhathi ezahlukahlukene. Ngeshadi lomugqa, ungathola ukubuka konke kokunyakaza ngamanani afana nesibonelo se-EUR / USD ngezansi.
Ngokuqhathanisa ishadi lomugqa, amashadi wamabha ayinkimbinkimbi kakhulu kepha adlula umugqa ekunikezeni imininingwane eyanele. Amashadi we-bar abuye ahlinzeke ngombono wokuvula, wokuvala, amanani aphakeme futhi aphansi ngamabili wezezimali. Ngaphansi kwe-eksisi emile ebheke ebangeni lokuhwebelana elijwayelekile, uzothola inani eliphansi kakhulu lokuhweba ngaleso sikhathi ngenkathi eliphakeme kakhulu liphezulu.
I-hash evundlile ikhombisa intengo yokuvula ngakwesokunxele sethadi lebha nentengo yokuvala ngakwesokunene.
Ngokunyuka okuguquguqukayo kokushintshashintsha kwamanani, imigoqo iyakhula ngenkathi incipha lapho ukuguquguquka kokushintshashintshashintshashintsha kwemali kube nzima. Lokhu kuguquguquka kubangelwa yiphethini yokwakha yebha.
Umdwebo ongezansi wombhangqwana we-EUR / USD uzokukhombisa umfanekiso omuhle wokuthi ishadi le-bar libukeka kanjani.
Amashadi wokukhanyisa amakhandlela asebenzisa umugqa othe mpo ukukhombisa amabanga okuhweba aphakeme kakhulu kuya phansi njengoba amanye amashadi e-Forex enza nawo. Kunamabhlogo ambalwa ozowathola maphakathi akhombisa amabanga entengo wokuvula nokuvala.
Ibhulokhi elimaphakathi noma eligcwele eligcwele lisho ukuthi inani lokuvala le- lwemali pair ingaphansi kwenani layo lokuvula. Ngakolunye uhlangothi, lapho ibhulokhi eliphakathi linombala ohlukile noma lingagcwalisiwe, bese livalwa ngentengo ephakeme kunaleyo eliyivulile.
Indlela Yokufunda Amashadi Ekhandlela Amakhandlela
Ukuze ufunde ishadi lekhandlela, kufanele uqale uqonde ukuthi liza ngezindlela ezimbili; amakhandlela omthengisi kanye nomthengi njengoba kubonakala ngezansi.
Lezi zinhlaka ezimbili zamakhandlela futhi zikunikeza njengomthengisi imininingwane ebaluleke kakhulu. Lokhu kufaka phakathi:
Ikhandlela eliluhlaza okwesibhakabhaka kwesinye isikhathi elimhlophe limelela umthengi futhi lichaza ukuthi umthengi wanqoba ngesikhathi esinikezwe ngoba izinga lentengo yokuvala liphezulu kunalelo lokuvulwa.
Ikhandlela elibomvu kwesinye isikhathi elimnyama limelela umthengisi futhi lichaza ukuthi umthengisi wanqoba ngesikhathi esinikeziwe ngoba izinga lentengo yokuvala lingaphansi kunalelo lokuvula.
Amanani entengo ephansi nephakeme achaza ukuthi kukhethwe inani eliphansi kakhulu nentengo ephakeme kakhulu esikhathini esithile.
Uma ungazi okwenziwe yi-Forex, nakanjani uzowenza amaphutha ambalwa futhi isinyathelo sokuqala sokuvimbela lokhu kungenzeki ukwazi ukuthi ungawafunda kanjani amashadi. Kunezinhlobo eziningi zamashadi e-Forex kodwa ezintathu esiziqokomisile lapha eziphezulu. Ungahle uhambe nanoma yikuphi lapho uzizwa ekufanelekela wena futhi uqonde ukuthi amashadi asebenza kanjani ngaphambi kokuntela ezweni le-Forex.